KOOXDA BARCELONA OO REAL MADRID KU XASUUQDAY GAROONKEEDA+ SAWIRRO | Saxil News Network
KOOXDA BARCELONA OO REAL MADRID KU XASUUQDAY GAROONKEEDA+ SAWIRRO
Madrid:-(saxilnews.com) Sadex gool oo ay kala dhaliyeen Luis Suarez, Aleix Vidal iyo Lionel Mesi ayaa Barcelona ka saaciday iney guul muhiim ah ka gaaraan dhigooda Real Madrid kulanka El-Clasico, waxaana la fahamsan yahay in Los Blancos ay rajadeeda horyaalka La Liga quus joogto madama ay 14-dhibcood ka hooseeyaan koxda hogaamineysa ee Balaugrana iyagoo kulan gacanta ku heysta.
Lionel Messi wuxuu dhaliyay goolkiisii 25-aad ee kulanka El-Clasico, sidoo kale goolkiisii 15-aad ee Santiago Bernabeu dhamaan tartamada oo dhan iyo goolkiisii 17-aad ee horyaalka La Liga kulanka El-Clasico markii uu dhameystiray rigoore lagu abaalmariyay.
Real Madrid qeybahii ugu dambeeyay ciyaarta waxey ku ciyareysay 10-xidig maadama laga saaray kulanka Dani Carvajal oo kubad goolka u socota gacanta ku badbaadiyay.
DAQIIAADII 5-AAD: Dani Carvajal ayaa sameeyay isku daygii ugu horeeyay kulanka El-Clasico kadib markii uu kubad daciif ah goolka ku tuuray, Stegen ayaana isku duubay.
HALIS: Daqiiqadii 12-aad: Cristiano Ronaldo ayaa lumiyay fursad ay aheyd inuu dhameystiro markii dhanka bidix kubad joog hoose ah looga soo dhigay, balse xidiga reer Portugal lugta ayuu la waayay.
DAQIIQADII 25-AAD: Real Madrid ayaa abuurtay weerar markii Modric uu kubad u gudbiyay Kovacic oo jooga geesta bidix ee xariiqda ganaaxa, waxaana kubadii uu isku dayay inuu ku caawiyo Benzema ama Ronaldo – si fiican ayaa loo soo difaacay.
BADBAADO: Daqiiqadii 30-aad: Lionel Messi ayaa si qiyaano ah kubad joog sare ah u gudbiyay Paulinho oo xerada ganaaxa ku jiray, si fiican ayuu goolka ula beegsaday balse Navas ayaa si cajiib ah isaga saaray.
BADBAADO: Daqiiqadii 31-aad: Cristiano Ronaldo aya kubad lasoo galay xerada ganaaxa, isagoo isku dayaya inuu xariiftamo, balse kubad xatooyo ah ayuu goolka aadiyay taasoo joog hoose aheyd waxaana lugta uga saaray Stegen.
FURSAD: Daqiiqadii 34-aad: Xidigaha Madrid ayaa abuuray weerar rogaal celis ah, Ronaldo ayaana dhanka kubad loo gudbiyay isagoo jooga dhanka bidix ee xerada Barcelona, bale kubadii uu damcay inuu u gudbiyo Benzema waxa ku qabsaday Pique oo ku qasbay inuu dibad u saaro.
BADBAADO: Daqiiadii 39-aad: Paulinho ayaa sameeyay isku daygii labaad ee ciyaarta oo uu ku beegsaday goolka Real Madrid, markii uu si awood leh u madaxeeyay kubad uu Messi kasoo qaaday dhanka midig ee xerada ganaaxa.
BENZ-BIRTA: Daqiiqadii 42-aad: Karim Benzema ayaa ku dhawaaday inuu hogaanka u dhiibo Real Madrid, balse kubadii uu madaxeeyay isagoo xerada ku jira birta bidix ayaa ka beenisay.
Qeybta hore ciyaarta ayaa lagu kala maray barbaro gool la’aan ah iyadoo Los Blancos ay aheyd kooxda inta badan heshay fursadaha isla markaana iska qasaarisay.
Qeybtii labaad ayaa la isku soo laabtay iyadoo Barcelona ay bilowday iney cadaadis saarto goolka Real Madrid, wax isbadal ahna lama sameynin.
GOAL: Daqiiqadii 54-aad: Luis Suarez ayaa si fudud u dhameystiray kubad uu dhinaca ka keenay Sergi Roberto, Rakitic ayaa si xor ah khadka dhexe ugu soo lugeeyay ka hor inta uusan si fudud Sergi ku siinin, waxeyna kaamirooyinka qabteen Kovacic oo aan isku dayin inuu raacdo isagoo kaliya ka fakarayay shaqadii loo idmay ee Messi aheyd.
BADBAADO: Daqiiqadii 61-aad: Paulinho ayaa isku dayay inuu gool u dhaliyo Barcelona, balse uma suuragalin inuu shabaqa soo taabto waxaana ku dhagay Navas.
RIGOORE+CASAAN: Barcelona ayaa daqiqad waalli ah galisay Real Madrid, Suarez aya kubad ku garaacay Navas, Messi ayaa helay oo kubad u taabtay Suarez – mar kale ayuu isku dayay birta ayey ku dhacday, balse Carvajal ayaa gacanta ku taabtay kubad goolka u socotay. Garsoorka ayaa tilmaamay rigoore sidoo kalana casaan siiyay Carvajal.
GOAL: Daqiiqadii 64-aad: Lionel Messi ayaa shabaqa soo taabtay wuxuuna dhaliyay goolkii labaad ee kooxdiisa, wuxuuna ahaa goolkii 25-aad ee uu ka dhaliyo kulanka El-Clasico dhamaan tartamada oo dhan waana kii 17-aad oo uu ka dhaliyo horyaalka La Liga.
Zinedine Zidane wuxuu qaatay go’aan adag wuxuuna soo galiyay ciyaarta Gareth Bale iyo Marco Asensio isagoo saray Kovacic iyo Casemiro, waxeyna dhanka Madrid yeelatay dhaqaaqa dhanka weerarka ah.
BADBAADO: Daqiiqadii 76-aad: Gareth Bale ayaa sameeyay isku day halis ah markii uu kubad ku tuuray goolka isagoo jooga mel ka sokeysa diilinta lixaad ee rigoorada, balse Stegen ayaa si aan caadi aheyn u badbaadiyay.
BADBAADO: Daqiqadii 78-aad: Gareth Bale ayaa isku dayay inuu dhaliyo gool rajada Madrid soo celiya markii uu kubad ka toogtay banaanka xerada ganaaxa, balse Stegen ayaa mar kale si aan caadi aheyn u badbaadiyay.
BADBAADO: Daqiiqadii 81-aad: Real Madrid ayaa daqiiqad waali ah galisay Barcelona, kubad u tuuray Kroos waxey gacanta uga dhacday Rakitic, balse mar kale Ramos ayaa helay waxaana badbaadiyay Stegen.
Daqiiqadahii ugu dambeeyay Andre Gomes ayaa laba fursadood la siiyay si uu gool u dhaliyo, balse labadaba waa qasaariyay, mana ka saacidin kooxdiisa inuu gool sadexaad u dhaliyo.
GOAL: Daqiiqadii 90-aad: Aleix Vidal ayaa dhaliyay goolka sadexaad ee aan aadka loogu dabaal dagin madama kulanka uu dhamaad ku dhawaa, Messi ayaa si fiican usoo maray Marcelo ka hor inta uusan siinin Vidal.
Natiijada waxey ku dhamaatay 0-3, oo ay guusha ku raacday Barcelona, waxeyna 14-dhibcood ka sareysaa Los Blancos iyadoo kulan baaqi ah gacanta ku heysata, sidoo kale Balaugrana waxey ku hogaamineysaa horyaalka 9-dhibcood oo ay ka sareyso Atletico Madrid halka Valencia la sugi doono waxa ay sameyso.